Fanatanjahantena an-tsekoly : atao any Taolagnaro ny JNSS (NewsMada) | AEMW
Fanatanjahantena an-tsekoly : atao any Taolagnaro ny JNSS (NewsMada)
« Jeux nationaux du sport scolaire » na « JNSS ». Ny 20 ka hatramin’ny 28 aogositra izao no tontosana any Taolagnaro ity fanatanjahantena an-tsekoly handraisan’ny faritra maro eto Madagasikara anjara ity. Tanjona ao anatin’izao lalao izao ny hitadiavana fahombiazana ho an’ny mpianatra tsirairay ho fampivelarana azy ireny ara-batana sy ara-tsaina. Ho fampitoviana lenta indray ny mpianatra tsirairay eo anivon’ny fiarahamonina. Ankoatra izay, ny sehatra tahaka itony no hitiliana ireo hoavin’ny mpanao fanatanjahantena malagasy any aoriana.
Anisany mandray anjara lehibe amin’izao « JNSS » tanterahina any Taolagnaro izao ny Vaomieram-pirenena malagasy miara-miasa amin’ny Unesco. Anisan’ny kendrena amin’ny fihaonana tahaka izao ny hisian’ny fifanakalozana ara-kolontsaina eo amin’ny faritra 22 misy eto Madagasikara. Tafidtra ao anatin’ny tanjon’ity sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny kolontsaina sy ny fanabeazana ity rahateo ny fampivelarana ny maha izy ny olona tsirairay.
Tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny telo tonta (3P) no nanoloran’ny orinasa Ocean ambonin’akanjo ho an’ny delegasion’ny faritra Alaotra Mangoro sy ho an’ny Vaomieram-pirenena malagasy miara-miasa amin’ny Unesco.
Nanagona : HaRy Razafindrakoto
← Dingana lehibe… : hisy isan-taona ny « Festival de théâtre » (NewsMada)
Beach soccer – «Can 2016» : nanafika an’i Mozambika ny Barea (NewsMada) →